Shina tsindrona plastika mpamokatra sy mpamatsy | Mestech
Bobongolo tsindrona plastika no fitaovana hamokarana vokatra plastika, izay ampiasaina amin'ny famokarana betsaka. Ny bobongolo tsindrona dia afaka manome firafitra sy habe marina tsara ho an'ny vokatra plastika mora sy haingana.
Inona avy ireo lasitra fanindronana plastika
Bobongolo tsindrona plastika(bobongolo tsindrona) dia karazana fitaovana hamokarana vokatra plastika, ary koa fitaovana iray hanomezana vokatra feno plastika sy habe marina. Ny famolahana tsindrona dia karazana fomba fanodinana ampiasaina amin'ny famokarana betsaka ny faritra sarotra sasany. Manokana, ny plastika natsonika ny hafanana dia atsofoka ao anaty lavaka famolavolana amin'ny alàlan'ny milina fanorohana tsindrona ao ambany fanerena avo, ary avy eo nangatsiaka sy nohamafisina mba hahazoana ireo vokatra voavolavola.
Ny mampiavaka ny lasitra fanindronana
1.Ny bobongolo tsindrona dia afaka mamorona faritra plastika misy rafitra sarotra, habe marina ary kalitao anatiny tsara amin'ny fotoana iray.
2.Na dia mety miovaova be aza ny firafitry ny lasitra plastika noho ny karazany sy ny fahombiazan'ny plastika, ny endrika sy ny firafitry ny vokatra plastika ary ny karazan'ilay milina tsindrona, dia mitovy ihany ny firafitra fototra. Ny bobongolo dia mazàna amin'ny rafitra mandraraka, ny rafitra mifehy ny mari-pana, mamorona faritra sy ampahany amin'ny rafitra. Ny rafi-pandatsahana sy ny kojakoja famolahana dia ireo ampahany izay mifandray mivantana amin'ny plastika ary miova amin'ny plastika sy vokatra. Izy ireo no ampahany sarotra sy azo ovaina indrindra amin'ny lasitra plastika, izay mitaky ny fanatontosana avo lenta sy farany tsara.
Ny firafitry ny lasitra fanindronana
Ny lasitra fanindronana dia misy bobongolo mihetsika sy bobongolo miorina. Ny bobongolo mihetsika dia apetraka amin'ny môdely mihetsika ao amin'ny milina famolavolana tsindrona, ary ny bobongolo raikitra dia apetraka amin'ny môdely raikitra amin'ny milina fanodinana tsindrona. Mandritra ny famolahana tsindrona, ny bobongolo azo ovaina sy ny bobongolo raikitra dia mihidy mba hamorona ny rafitra mandraraka sy ny lavaka famolavolana. Rehefa nosokafana ny bobongolo dia misaraka ny bobongolo mihetsika sy ny bobongolo raikitra hamoahana ireo vokatra plastika. Mba hampihenana ny enta-mavesatra amin'ny famolavolana bobongolo sy ny famokarana, ny ankamaroan'ny lasitra fanindronana dia mampiasa ny fenitra bobongolo mahazatra.
Karazana bobongolo mifanaraka amin'ny toetrany ampiasaina
(1) Lasitra mihazakazaka mafana
Miaraka amin'ny fanampian'ny fitaovana fanamainana, ny plastika ao amin'ny rafitra mandraraka dia tsy hamafisina ary tsy haseho amin'ny vokatra, ka antsoina koa hoe runnerless die. Tombontsoa: 1) Tsy misy fako 2) afaka mampihena ny tsindry fanindronana, afaka mampiasa bobongolo maro-lavaka 3) afaka hanafohezana ny tsingerin'ny famolavolana 4) manatsara ny kalitaon'ny vokatra mety amin'ny toetran'ny mpihazakazaka mafana: 5) ny elanelam-potoana miempo plastika dia malalaka. Manana fluidity tsara amin'ny mari-pana ambany izy ary marin-toerana tsara amin'ny hafanana avo. 6) Mora tsindry amin'ny tsindry ary tsy mikoriana tsy misy faneriterena, fa afaka mikoriana rehefa apetraka ny tsindry. 7) Hafanana manokana tsara, mba hampangatsiaka haingana amin'ny maty. Ny plastika misy amin'ireo mpihazakazaka mafana dia ny PE, ABS, POM, PC, HIPS, PS. Misy karazany roa ny mpihazakazaka mafana mahazatra: 1) maody fihazakazahana hafanana 2) maody fihazakazahana adiabatic.
(2) bobongolo mafy
Ny takelaka vy ampiasaina amin'ny die anatiny dia mila fitsaboana hafanana aorian'ny fividianana, toy ny famonoana sy ny famonoana karbaona, mba hahafeno ny fepetra ilaina amin'ny fampiasana. Ny lasitra fanindronana toy izany dia antsoina hoe maty mafy. Ohatra, ny maty anaty dia mandray vy H13, vy 420 ary vy S7.
(3) bobongolo malefaka (ambany 44HRC)
Ny vy ampiasaina amin'ny lasitra anatiny dia afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fampiasana tsy misy fitsaboana hafanana aorian'ny fividianana. Ny tsindrona toy izany dia antsoina hoe bobongolo malefaka. Raha ny maty anaty dia vita amin'ny vy P20, vy vy, vy 420, NAK80, alimo ary varahina beryllium.
(4) bobongolo-tsindrona indroa
Ny bobongolo-tsindrona indroa dia bobongolo iray izay misy tsiranoka plastika roa ampidirina amin'ny milina fanorona tsindrona iray ary ahodina indroa, fa indray mandeha monja ny vokatra. Amin'ny ankapobeny, ity fizotry ny famolavolana ity dia antsoina koa hoe famolavolana tsindrona singa roa, izay mazàna dia vita amina andiana bobongolo ary mitaky milina fanorohana tsindrona roa mitifitra.
(5) Famolavolana tsindrona miaraka amin'ny haingon-doko sy labozia vita amin'ny lasitra
Fanasoketana lasitra plastika amin'ny alàlan'ny rafitra gating
Ny lasitra plastika dia azo zaraina amin'ny sokajy telo araka ny karazany ny rafitra gating.
(1) bobongolo vavahady sisiny (bobongolo roa takelaka): Ny mpihazakazaka sy ny vavahady dia entina miaraka amin'ny vokatra eo amin'ilay tsipika fisarahana. Ny endriny no tsotra indrindra, mora aroso ary ambany ny vidiny. Noho izany, betsaka kokoa ny olona mampiasa rafitra nozera lehibe hiasa. Ny firafitry ny lasitra plastika dia mizara roa: bobongolo mavitrika sy bobongolo raikitra. Ny ampahany mihetsika amin'ny milina fanindronana dia ny ampahany azo ovaina (ny ankabeazan'ny sisin'ny famoahana), ary ny tsy fahavitrihana amin'ny faran'ny fanesorana ny milina fanindronana dia antsoina matetika hoe bobongolo manamboatra. Satria ny ampahany raikitra amin'ny die goavambe lehibe dia mazàna amin'ny takelaka vy roa, dia antsoina koa hoe lasitra misy lovia roa. Ny bobongolo roa-takelaka no rafitra tsotra indrindra amin'ny bobongolo noza lehibe.
(2) bobongolo vavahady pin-point (bobongolo telo takelaka): ny mpihazakazaka sy ny vavahady dia tsy eo amin'ny tsipika fizarazarana, amin'ny ankapobeny mivantana amin'ny vokatra, noho izany dia sarotra kokoa ny mamolavola vondrona tsipika fizarazarana ary sarotra zahana . Ny rafitra noza tsara dia voafantina matetika araka ny fepetra takian'ny vokatra. Ny ampahany raikitra amin'ny molotra mitifitra tsara dia mazàna amin'ny takelaka vy telo, ka antsoina koa hoe "lasitra lovia telo" ho an'ity karazan-drafitra maty ity. Ny bobongolo telo takelaka no rafitra tsotra indrindra amin'ny bobongolo noza tsara.
(3) bobongolo mihazakazaka mafana: ny firafitr'ity karazana maty ity dia mitovy amin'ny an'ny nozatra tsara. Ny tsy fitoviana lehibe indrindra dia ilay mpihazakazaka dia miorina amin'ny takelaka mafana na mpihazakazaka mafana miaraka amin'ny hafanana tsy tapaka. Tsy misy demoulding fitaovana mangatsiaka ary ny mpihazakazaka sy ny vavahady dia mivantana amin'ny vokatra. Noho izany, ny mpihazakazaka dia tsy mila demoulding. Ity rafitra ity dia antsoina koa hoe no no rafitra, izay afaka mamonjy akora manta ary azo ampiharina. Raha misy akora lafo lafo kokoa sy takiana ambonimbony kokoa amin'ny vokatra dia sarotra ny mamolavola sy manodina azy, ary lafo ny vidin'ny maty sy ny bobongolo. Rafitra mpihazakazaka mafana, fantatra ihany koa amin'ny hoe rafitra mpihazakazaka mafana, mazàna dia misy fehin-kibo mafana, lovia mpihazakazaka mafana ary boaty elektrika fanaraha-maso. Ny rafitry ny mpihazakazaka mafana iraisana dia manana endrika roa: mpihazakazaka mafana tokana sy mpihazakazaka marobe. Ny vavahady mafana tokana dia ny mampiditra plastika anidina mivantana ao anaty lavaka amin'ny alàlan'ny tanany vavahady mafana iray, izay mety amin'ny lavaka tokana sy bobongolo plastika tokana; vavahady mafana maro teboka dia ny mizara ny fitaovana anidina ho an'ny sampana Heat Gate, amin'ny takelaka misy vavahady mafana, ary avy eo miditra ao amin'ny lavaka. Izy io dia mety amin'ny lavaka tokana, fahana marobe ary fantsom-bava
Ny fampiharana lasitra plastika
Ny bobongolo tsindrona dia fitaovana fanodinana lehibe amin'ny famokarana vokatra indostrialy isan-karazany. Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny indostrian'ny plastika sy ny fampiroboroboana ary ny fampiharana ny vokatra plastika amin'ny sehatry ny indostria toy ny fiaramanidina, aerospace, electronics, milina, sambo ary fiara, ny fitakiana ny vokatra amin'ny bobongolo dia avo kokoa ihany koa. Ny fomba famolavolana lasitra nentim-paharazana dia tsy nahatratra ny fepetra takiana ankehitriny. Raha ampitahaina amin'ny famolavolana lasitra nentim-paharazana, ny haitao CAE manampy ny solosaina dia manana tombony lehibe amin'ny fanatsarana ny vokatra, miantoka ny kalitaon'ny vokatra, mampihena ny vidiny ary mampihena ny hamafin'ny asa.
1. Vokatra elektronika sy fifandraisana:
2. Fitaovana amin'ny birao;
3. Fiantohana fiara;
4. Fitaovana ao an-trano;
6. Fiarovana ara-pahasalamana sy tontolo iainana;
7. Fitaovana indostrialy;
10. Fitaovana fanamboarana, lakozia sy fitaovana fidiovana ary fitaovana fidiovana
Mestech dia mpanamboatra matihanina miasa amin'ny famokarana lasitra tsindrona sy ny famokarana tsindrona mandritra ny 20 taona. Manana ekipa injeniera tena tsara izahay ary manana traikefa fanamboarana manankarena. Afaka mamolavola sy mamokatra lasitra tsindrona plastika avo lenta ho an'ny mpanjifanay izahay. Ny lasitra fanindronana ataonay dia manarona fitaovana elektronika, elektrika, fiara, fitsaboana, fitaterana ary fitaovana indostrialy. Raha mila ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Previous: Lasitra fanariana maty
Manaraka: Lasitra mihazakazaka mafana